Levitikosy 4.22-35 : FANATITRA MAHA VOAVELA HELOKA / Mana isan'andro / Soratra Masina / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Levitikosy 4.22-35 : FANATITRA MAHA VOAVELA HELOKA04/02/2018 07:49
FANATITRA MAHA VOAVELA HELOKA
Fanatitra araka ny karazany avy. Hitantsika omaly ny fanatitra ataon’ny mpisoronabe sy ny vahoaka raha latsaka anaty fahotana izy ireo. Androany kosa dia ny fanatitra ataon’ny mpitondra, na foko na firenena, sy ataon’ny olona tsirairay, na lahy na vavy, na manan-karena na mahantra no hitantsika. Arakaraka ny sarangan’ny olona ny fanatitra izay ateriny eo anatrehan’Andriamanitra. Fanatitra tsy misy kilema. Miverina hatrany io biby “tsy misy kilema” io (23, 28, 32) satria tsy noho ny faharatsian’ilay fanatitra no hamonoana azy fa ny an’ilay mpanao fanatitra. Ilay biby dia vonoina hisolo toerana ilay mpanota. Izay no antony hametrahan’ny mpanao fanatitra ny tanany eo amin’ny lohan’ilay biby (24, 29, 33).
Fanatitra mitondra famelan-keloka. Tsy marina Andriamanitra raha tsy manasazy ny mpanota satria vahoakany ireo. Saingy marina Andriamanitra raha mamela heloka ireo olona ireo satria ny sazy izay tokony nihatra tamin’izy ireo dia efa nentin’ny biby tsy misy kilema izay natolotra teo amin’ny toerany. Izay no niverimberenan’ny teny hoe “dia havela ny helony” (26, 31, 35).
Fanatitra alok’i Jesoa Kristy. Voalaza matetika fa maty noho ny fahotantsika i Kristy. Ny dikan’izany, raha izaho no tokony ho faty noho ny fahotako dia i Kristy izay tsy nanan-keloka no maty teo amin’ny toerako ka izay no nahazoako famelan-keloka (II Korintiana 5.21). Ny fanadiovana no mampahadio kokoa ny zavatra iray noho ny tsy fandotoana azy.
Mihoatra ny fanambarana ny famindrampon’Andriamanitra, ny famelan-keloka dia asa fanadiovana, famonjena amin’ny fahasoavana.